0.5T flake chando muchina
500kg / zuva flake chando muchina + 300kg ice yekuchengetera bin. Muchina une plug-uye-kutamba dhizaini. Iyo yakagadzirira kugadzirwa kwechando mushure mekubatana nyore nemvura nesimba. Ice rinobuda mukati memaminitsi mashanu mushure mekushandisa mushandisi bhatani rekutanga. Yese mabasa ekugadzira echando anoitwa zvizere otomatiki pasi pekutonga kwePLC. Sisitimu inozvidzivirira kure nekushomeka kwemvura / ice bin izere / kusagadzikana kwesimba magetsi / yakanyanya kukwirira kana kutonhora kwakadzika tembiricha / uye mamwe marudzi ekukundikana. W Iyo yakagadzirirwa evaporat ...
0.3T flake chando muchina
Zita reBrand: Herbin Ice Systems Tsanangudzo ye0.3T / zuva cube ice muchina. Chigadzirwa zita: Cube ice muchina Model: HBC-0.3T Ice zuva nezuva inogadzira kugona: Anopfuura 300kgs pamaawa makumi maviri nemana Maitiro ekushanda mashandiro: 30C ambient tembiricha uye 20C inlet mvura Ice dhivha: 22x22x22mm Ice kuchengetedza kugona: 280kgs Condenser: Mhepo / Mvura yakanyorova Simba inopa Chikamu chimwe chemagetsi emagetsi Cherechedzo: Chando chemuchina uyu chakavakirwa pane tembiricha iri 30C uye 20C yekupinda mvura tembiricha. W ...
Simba rinomhanya: 93.75 KW.
Ice ukobvu: 1.8-2.2mm.
Ice bin yekuchengetedza inokwanisa: 15,000 kgs echando maflakes kana akagadziridzwa.
Ice zuva nezuva inogadzira kugona: 30,000 kgs echando mafuru nemaawa makumi maviri nemana.
Ice bin yekuchengetera hunyanzvi: 10,000 kgs echando mafuru kana akagadziriswa
Ice zuva nezuva inogadzira kugona: zviuru makumi maviri zvemazana echando echando nemaawa makumi maviri nemana.
Ice bin yekuchengetedza chinzvimbo: 2500 kgs echando maflakes kana akagadziridzwa.
Ice zuva nezuva inogadzira kugona: 5000 kgs echando mafuru nemaawa makumi maviri nemana.
Ice bin yekuchengetedza inokwanisa: 1500 kgs echando maflakes kana akagadziriswa.
Ice zuva nezuva inogadzira kugona: 3000 kgs echando mafuru nemaawa makumi maviri nemana.